Home Wararka MW Xasan Sheekh oo shaaca ka qaaday arrin ay dowladda Farmaajo ka...
MW Xasan Sheekh oo shaaca ka qaaday arrin ay dowladda Farmaajo ka been abuurtay (Caddeyn)
Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka hadlay kororka dhaqaalaha dalka oo dowladda Soomaaliya ay marar badan ku celcelisay inay guulo ka gaartay. Xasan Sheekh ayaa sheegay in DF ay xaqiiqda ka been sheegeyso, oo arintaasi aysan aheyn wax cusub oo hadda bilowday, balse ay soo bilowdeen sanadkii 2013 ayna wanaagsan tahay in dowladda aysan iska sheegan guulaha dhanka dhaqaalaha la xiriira.
Wuxuu sheegay in tan iyo sanadkii 2013, sanadba sanadkii ka dambeeya uu kordhayay dhaqaalaha dalka Soomaaliya, balse hal mar oo kaliya dhaqaalaha inuusan iska kordhin. “Miisaaniyadda 2013 waxii ka dambeeyay koror ayay ku socotay, kororsiimadii ugu badnaa markaan anaga talada haynay ayuu dhacay, marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed walaahowga iyo Jahwareerinta inta ka koraan inay fiiriyaan buugaagta”ayuu yiri Xasan Sheikh.
Wuxuu sidoo kale sheegay in kororta dhaqaalaha Soomaaliya marka la eego 2013 inuu kasii badnaa sanadkii 2017 xiligaasi oo uu isaga xilka baneeyay.
“Maaliyadda waa meesha kaliya ee aan dacaayadda iyo borobogaandada gali karin, ileen waa wax qoran, Dowladdii aan hogaamin jiray bil kastaa waxaan website-ka Wasaaradda kusoo qori jirnay Dakhliga dalka soo galay iyo meesha uu naga soo galay” ayuu hadalkiisa kusii daray Xasan Sheikh.
Dowladda Federaalka aya gashay dhanka musuqmaasuqa iyo eexda heerkii ugu hooseeyay abid
Previous articleNew strategy to sub-colonize Somalia “The alliance of Ethiopia with GULF Arabs represented by UAE”
Next articleMadaxweyne Xaaf oo magacaabay Wasiir cusub oo kamid noqonaya Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug
Cabdi Xaashi & Wiilkiisa oo lagu eedeeyay in ay Fahad u boobayaan kuraas
Maamulka Dhuusamareeb oo Amaro kusoo rogay Musharrixiinta Golaha Shacabka
Gudiga Dorashada Maamulka Galmudug oo soo gudbinaya 69 xubnood oo kamid...
Qaraxyo dib uga Bilowday Muqdishu.